musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Fraport AG akabudirira anoisa tsamba yekuzivisa
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Fraport AG akabudirira anoisa tsamba yekuzivisa.
Chanhasi chipikirwa chinyorwa chinyorwa chinowedzera huwandu hwemari nyowani yemari yakakwidzwa naFraport AG panguva ya2021 kusvika ingangoita € 2.9 bhiriyoni. Nekudaro, iro Boka ikozvino rava nemari inosvika € 4.5 bhiriyoni mumari yemari pamwe chete nemaketeni akachengetedzwa uye asina kushandiswa.
Yakapihwa kwenguva yemakore mashanu neanomwe nehafu, chinyorwa chakaburitswa muzvikamu zvina.
Nekuda kwekuda kwakasimba, iyo yakazara nyaya vhoriyamu yakakwidziridzwa zvakanyanya kubva pane yekutanga yaifungidzirwa vhoriyamu ye € 200 mamirioni.
Landesbank Hessen-Thüringen uye UniCredit Bank AG vakashanda semubatanidzwa wekuronga nyaya yechikwereti cheFraport.
Fraport AG akabudirira kuisa tsamba yechivimbiso inosvika mamirioni mazana mashanu emadhora nhasi (Gumiguru 500). Yakapihwa kwenguva yemakore mashanu neanomwe nehafu, chinyorwa chakaburitswa muzvikamu zvina. Nekuda kwekuda kwakasimba kubva kune veGerman uye vekunze vatengesi, iyo yakazara nyaya vhoriyamu yakakwidzwa zvakanyatsojeka kubva kune yekutanga yaifungidzirwa vhoriyamu ye21 mamirioni. Nyaya yacho yakaitwa kumucheto wezasi kwemutengo wakapararira.
Nhoroondo ye Fraport AGnhengo yebhodi yepamusoro yezvemari uye inodzora (CFO), Prof. Iyi imwe vhoti yakajeka yekuvimba muFraport Boka. Zvakare, zvinosimbisa kuti isu tiri munzira chaiyo. Nekuda kwekuchengetedzwa kwemashandisirwo emari, takunda pamusoro pechirwere checoronavirus - uye tichakwanisa kuita mari inodiwa mune ramangwana. ”
Chanhasi chipikirwa chinyorwa chinyorwa chinowedzera huwandu hwemari nyowani yemari yakakwidzwa ne Nhoroondo ye Fraport AG panguva ya2021 kusvika kunosvika € 2.9 bhiriyoni. Nekudaro, iro Boka ikozvino rava nemari inosvika € 4.5 bhiriyoni mumari yemari pamwe chete nemaketeni akachengetedzwa uye asina kushandiswa.
Landesbank Hessen-Thüringen uye UniCredit Bank AG yakashanda semubatanidzwa anotungamira kuronga nyaya yechikwereti cheFraport.